BAAQ KU WAJAHAN BUDHCADA KA DILAACDAY DEGMADA JIGJIGA IYO DILKA LAGU HAYO SOOMAALIDA MAGAALADA DIREDHABA
Tuesday, 27 November 2018 06:37
Wali labo bilood lagama soo wareegin wakhtigii niman ka tirsan booliska Deegaanka Soomaalida ay jid gooyo ku sameeyeen gaadhi rakaab waday oo kasoo baxay Gobolka Harwo kuna socday maagaalada Jigjiga isaga oo maraya meel aad ugu dhaw magaalada kadibna si badheedh ah ay ugu toogteen dirawalkii suuqa badhtamihiisa.
Arrintaas markii Dawlada Deegaanku talaabo adag ka qaadi wayday, waxaa shalay iyo daraad dhacay in gaadiid kale oo ay leeyihiin muwaadiniin kasoo jeeda isla Gobolka Harawo ay budcad hubaysani ku weerartay meelo ka tirsan Demada Jigjiga oo kuyaal jidka kasoo gala Magaalada Lafaciise iyo jidka u baxa Magaalada Jimacsani.
Budcadaas labada maalmood weeraray muwaadiniintaas waxay gaysteen khasaare aad u fool xun iyaga oo dil u gaystay laba qof, dhaawacay sadex qof, dhacayna lacag dhan 1,000,000 Bir . Waxaa noo muuqda in ayna dawladu samaynin dadaalkii loo baahnaa ee wax lagaga qaban lahaa budcadan ka qawlaysanaysa meel u muuqata caasimada deegaanka ee Jigjiga, walina dawladu ay dugsanayso ceebtaas kudul dhacday.
Sidoo kale waxaa guryahoogii ka maqan qoysas badan oo Soomaali ah oo degan Magaalada Diredhaba, kadib markii weerar lagu qaaday xaafadaha ay deganaayeen dadna lagu laayay. Taaso ay ku lug leeyihiin kooxo kasoo jeeda Qowmiyada Oromada.
Hadaba anaga oo kaxun dhacdooyinkan waxshinimo ee ka dhacaya duleedka Jigjiga iyo dhibaatooyinka dadka soomaalida ah loogu gaysanayo Magaalada Diredhaba waxa aan ku baaqaynaa qodobadan hoos ku qoran:
1. Madax waynaha deegaanku waa in uu qaadaa talaabo lagu sugayo amniga muwaadiniinta, sharcigana uu horkeenaa budcadaa dilka, dhaawaca iyo dhaca masuulka ka ahayd iyo cida ka danbaysaba.
2. Dadka lagu tuhunsan yahay in ay falkan fulaynimo ku kaceen iyo cida ka danbaysa waxaa ogaysiinaynaa in lagu daba jiro oo ayna ka faa'iidi doonin waxshinimada ay ku kaceen.
3. Bulshada Gobolka Harawo ee falalka foosha xun loogu qaystay Degmada Jigjiga , waxaan ugu baaqaynaa in ay marka hore wakhti siiyaan dawlada si ay wax uga qabato, iskana ilaaliyaan in ay ku kacaan aargoosi loo gaysanayo ruux soomaali ah oona waxba galabsan.
4. Waxa kale oo aan maamulka Deegaanka Soomaalda oon moodo in uu xilkiisa ka gaabinayo ugu baaqaynaa in si degdeg ah ugu gurmadaan dadka soomaaliyeed ee lagu bara kiciyay Magaalada Diredhaba ayna xil iska saaraan in nagtooda iyo hantidoodaba badbaadiyaan.
More in this category: « SPECIAL REPORT: Winners and losers in Horn of Africa’s regional economic integration pact Why Colonel Muse Biixi Didn’t Continue His Presidential Tour To Badhan? »